जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस्, चाहेको सबै पूरा हुनेछ ! ईन्कार नगरौं – " कञ्चनजंगा News "
जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस्, चाहेको सबै पूरा हुनेछ ! ईन्कार नगरौं
No Comments on जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस्, चाहेको सबै पूरा हुनेछ ! ईन्कार नगरौं
संघीय नेपालको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै प्राचीन जनकपुर शहरलाई प्रदेश नम्बर २ को छायाँ राजधानीको रूपमा हेरिएको छ । छायाँ यो अर्थमा की यसको अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन । त्यसो त नेपाल प्रहरी र राष्टबैंक सहित विभिन्न सरकारी निकायहरूको जनकपुरमा न प्रदेशको प्रमुख कार्यालय स्थापना भइसकेको छ भने अझै हुने क्रम जारी छ । तसर्थ जनकपुरलाई सीधै प्रदेश नम्बर २ को राजधानी भन्दा अनुपुयुक्त नहोला ।
त्यसो त, यसको आफ्नै विशेष परिचय छ, जुन अझै पनि चिनाउनुपर्ने खासै जरुरी छैन । जनकपुर धार्मिक र सांस्कृतिक जगमा उभिएको प्राचीन नगरी हो । प्राचीनकालमा मिथिला, विदेह र तिरभुक्ति पनि भनिने जनकपुर जनकवंशी राजाहरूको राजधानी पनि थियो । यसबारे रामायण, वेद, पुराणलगायत उपनिषद्मा र मिथिलाको उन्नत सभ्यताबारे व्याख्या गरिएको छ ।
जानकी मन्दिरको शतवार्षिकी २०५१ सालमा मनाइयो । मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासको कक्षमा सन्त तस्बिरको हारमा महारानी भानु कुँवरी पनि छन् । उनी छोरा लिएर प्रसन्न मुद्रामा बसेकी छन् भने साथमा राजा प्रताप सिंह । मन्दिरमा बिहान ७ बजे र बेलुका ८ बजे आरती हुन्छ । दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म गर्भगृहको ढोका खुल्दैन । त्यहाँ पुग्दा दर्शनार्थीको भीड थियो ।
हाम्रो साथमा फूल, अक्षता, धुप केही थिएन । मनफूल चढायौं । गर्भगृहपछाडि सांस्कृतिक संग्रहालय छ । त्यसले हलेश्वरी महायज्ञ भएर सीता फेला परेदेखि सीतारामको विवाह भएकोसम्म झल्काउँछ । भुइँतलामा पुराना गहना र भेषभूषा छन् । मन्दिर प्राङ्गणमा फन्को लगाउँदा मजजाको भजन सुन्न पाइन्छ । भक्तजनहरू सीताराम, सीताराम ! गाइरहेका देखिन्छन् ।
जनकपुरमा नेपालीभन्दा भारतीय बढी आउँछन् । जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, जनक मन्दिर र विवाह मण्डप घुमेर फर्कन्छन् । तीन–चार घण्टा बिताउँछन् । जब कि दुई रात सजिलै बसेर घुम्न घुमफिर प्याकेज बनाउन सकिन्छ । रामले धनुष तोडेको रंगभूमि मैदान, जानकी मन्दिर, विवाह भएको ठाउँ मणिमण्डप, धनुषको टुक्रा खसेको ठाउँ धनुषाधाम, तलाउ र जलेश्वर मन्दिरलगायत समेट्न सकिन्छ ।
भारतीय सीमा जटही ११ किमि र भित्तामोड १९ किमि दुरीमा छ । सडक व्यवस्थित भए तीर्थालु बढ्छन् । विवाह पञ्चमीमा लाखौं भारतीय आउँछन् । त्यसबाहेक झुला महोत्सव, दशहरा, छठ र मिथिला परिक्रमाका बेला ठूलो मेला लाग्छ ।
← सुन र हिराबाट बनेको ट्वाइलेट, जसमा यति धेरै सुन र हिरा जडान → पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन, पशुपतिनाथको दर्शन गरी एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर पौष १४ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस्